Eleleghara anya na ndagwurugwu Plakánek - PetrPikora.com
Damchọghị ọdịmma onwe gị na ndagwurugwu Plakánek
PetrPikora.com on August 13, 2019
Selfchọ ọdịmma onwe ya (Calopteryx virgo) bụ ụdị nnụnụ mmiri site na nru ububa (Zygoptera), bi na Europe (gụnyere Czech Republic).
Na-enwu n'ụzọ achọghị ọdịmma onwe ya bụ 4,5 ruo 5 sentimita ogologo, nku bụ 6 ruo 7 centimeters. Mgbe izu ike nwere nku kechiri ekpuchi ahụ, nke bụ ụdị Zygoptera niile dị n'okpuru. Themụ nwoke ahụ nwere nku mara mma nke ukwuu. Nkpuru nke nwanyi di kwa oji, ma odighi ya oke nma, karie ya nma.
N’ime mmiri dị ọcha na mmiri iyi. Ha na-eme n'ebe dị elu nke 700 m. Imago ijiji site na mbubreyo Eprel ruo mbido Septemba. Otutu umu ha di iche-iche, o nwekwara ike idi otutu ebe obibi ha.
Imebi ahihia ya na-efe n’elu obere mmiri na -ebi n’elu ahịhịa ma ọ bụ okwute gburugburu ya. Ndị okenye na-ejide obere ụmụ ahụhụ na-efe efe, nymphs mmiri na-ejide obere ụmụ anụmanụ aquatic. Mmepe nke nymphs na-ewe afọ abụọ. Mgbe ị na-etolite, ị ga-egosi nke ọma na ị ga-enwe njikọ aka dị egwu. Femalemụ nwanyị ndị eji nwanyị mekọtara na-arara àkwá n'ime ahịhịa na-adị n'ime ala nwoke, ma nwee ike ịbanye n'okpuru mmiri kpamkpam.
Chọ naanị onwe mPlakánekPlakánek nzọ ụkwụdragonfly
Elekere 19 gara aga